आयुर्वेदले संस्कृतप्रतिको आकर्षण बढ्दै | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / आयुर्वेदले संस्कृतप्रतिको आकर्षण बढ्दै
आयुर्वेदले संस्कृतप्रतिको आकर्षण बढ्दै
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार December 26, 2017	0 114 Views
बेलझुण्डी (दाङ)– नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा आयुर्वेद विषयको अध्ययन गर्न विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ ।
विश्वविद्यालयले विसं २०६७ को शै क्षिक सत्रदे खि सो विषयको बेचलर अफ आयुर्वेद मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बिएएमएस) अध्ययन अध्यापन २१ जना विद्यार्थीबाट शुरु गरे को थियो  । अध्ययनप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढे पछि विश्वविद्यालयले हाल सिट संख्या बढाएर ४० पु¥याएको छ ।
आयुर्वे दका प्रा डा रामचन्द्र अधिकारीले दिनुभएको जानकारीअनुसार विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थाले पछि विश्वविद्यालयले यही शै क्षिक सत्रदे खि ४० जनाले पढ्न सक्ने व्यवस् था मिलाएको हो  । आयुर्वेद अध्ययन संस्थाननै स्थापना गरी अध्यापन गराउने संस् कृत विश्वविद्यालय ने पालकै पहिलो हो  ।
विज्ञान संकायमा जीवविज्ञान विषय लिएर दश जो ड दुई परीक्षामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएका विद्यार्थीले बिएएमएस पढ्न पाउ“छन् । यो योग्यता हासिल गरेका धेरै विद्यार्थीले संस्कृत विश्वविद्यालयमा आयुर्वेद पढ्न आवेदन दिने गरेका छन् ।
संस् थानअन्तर्गत विश्वविद्यालयका तीन क्याम्पसमा आयुर्वे द अध्यापन भइरहे को छ । दाङको बे लझुण्डीस् िथत के न्द्रीय आयुर्वे द विद्यापीठ, विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त जनकपुरस् िथत मिथिला आयुर्वेद मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर र पतञ्जलि आयुर्वेद मेडिकल धुलिखे ल छन् ।
सम्बन्धनप्राप्त निजीस् तरका कले जमा अस् पताल, पढाउने प्राध्यापक र व्यवस् थापनको समस् या छ । साढे पा“च वर्ष लाग्ने आयुर्वे द को र्षका लागि ११ लाख शुल्क तो किएको छ । विश्वविद्यालय ५० शै øयाको आयुर्वे द अस् पतालसमे त सञ्चालन गरे को छ ।
विश्वविद्यालयका प्रा डा अधिकारी प्राचीनकालमा आयुर्वे दको महत्व बढी भए पनि समयक्रममा ओ झे लमा परे को बताउनुहुन्छ । ‘सरुवा रो गको बिगबिगी भएका बे ला एन्टियो बायो टिकले ठीक गथ्र्याे , मधुमे ह, मुटु, अर्बुद, ह्दयाघात, मस् ितष्कघात आदि बढ्न थाले पछि आयुर्वे दको महत्व पीडितले बुझ्न थाले का छन्, उच्च वर्गका मानिस बुझे र आयुर्वेदमा आकर्षित छन्, निम्नवर्गका निःशुल्कले आउँछन्, मध्यम वर्गका मानिस अझै आयुर्वे द उपचार पद्धतिमा आइपुगेका छैनन्’– उहाले भन्नुभयो  ।
आयुर्वे द पूर्ण विज्ञान भएकाले कसरी जीवनयापन गर्ने सिकाउ“छ । खानपानका कारण लाग्ने रो गबाट बचाउ“छ । आयुर्वे दमा कुन ऋतुमा के खाने ? कसरी बस् ने ? भन्ने विषयमा दिनचर्या र रात्रिचर्याको व्यवस् था गरिएको छ ।
आयुर्वे दिक औ षधिमा रासायनिक पदार्थ प्रयो ग नगरिने भएकाले यसले कुनै ‘साइड इफे क्ट’ गर्दै न । प्राकृतिकरुपमा आयुर्वे दका औ षधिको निर्माण हुन्छ । आयुर्वे द औ षधिको से वनले रो ग निको गर्नुका साथै शरीरमा प्रतिरो धी क्षमता बढाउ“छ । आयुर्वे दका धे रै पुस् तक संस् कृतमा भएकाले पनि विद्यार्थीले संस् कृत विश्वविद्यालयमै पढ्ने इच्छा राख्ने गरे का छन् । विश्वविद्यालयबाट बिएएमएस अध्ययन पूरा गर्नुभएका श्याम भट्टराई आयुर्वेद अध्ययन संस्कृतमै राम्रो हुने बताउनुहुन्छ ।
डोकोमा जडीबुटी, ट्याब्लेटमा औषधि
नेपाल दक्षिण फर्किएको भूमि भएकाले यहा“को जडीबुटी बढी प्रभावकारी हुन्छ । बिहारको अदुवाभन्दा ने पालको राम्रो हुन्छ । टिम्बुर, मृत्युञ्जय रस र बत्सनाभ पनि ने पालको हिमालय क्षे त्रकै राम्रो हुने अनुसन्धानबाट प्रमाणित भइसके को बताउनुहुन्छ प्रा डा अधिकारी ।
हिमालयको दे श ने पाल जडीबुटीमा धनी भए पनि नीति निर्माताले यसको महत्व बुझ्न सके नन् । नीति निर्माताले जडीबुटीको महत्व नबुझ्दा दे शबाट डो को मा जडीबुटी बाहिरिएर ट्याब्ले टमा औ षधि आपूर्ति हुने गरे को छ । जडीबुटीको महत्व बुझाउन विश्वविद्यालयले खे ती गर्ने भएको छ । दाङमा रहे को विश्वविद्यालयको जग्गामा जडीबुटी खे ती गर्ने तयारी गरिएको उपकुलपति प्रा डा कुलप्रसाद को इराला बताउनुहुन्छ ।
‘देउखुरीमा एक हजार तीन सय ७६ र बे लझुण्डीमा ४२ बिगाह जग्गा अतिक्रमण भएको छ । एकजना सुकुम्बासीले १८ धुर जग्गा कमाएका छन् । अरु सबै हुकुम्बासीले कब्जा गरे का छन् । जग्गा फिर्ता गर्न पा“चवटा सर्वदलीय बै ठक भइसके को छ । अब के ही समयमै समस् या समाधान हुने विश्वास छ’– उहा“ले भन्नुभयो  । यी जग्गाबाट विश्वविद्यालयमा विसं २०५८ सम्म एक हजार चार सय मुरी धान भित्रिन्थ्यो  । देउखुरीमा दुईवटा धनसार नै थिए । यो धान बे चे र विश्वविद्यालयको आवश्यकता पूर्ति गरिन्थ्यो  । तुलसीपुर र घो राही नगरपालिकामा पनि विश्व विद्यालयको तीन सय २६ बिगाह जग्गा छ ।
यसमध्ये पाच बिगाहमा विश्वविद्यालयले जडीबुटी खेती गर्न एक करोड बजेट छुट्याएको छ । अर्काे पा“च बिगाहमा तुलसीपुर नगरपालिकाले जडीबुटी खे ती गर्ने प्रस् ताव गरे को छ । नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे नमूनाका रुपमा जडीबुटी खे ती गर्ने तयारी गरिएको बताउनुहुन्छ ।
Previous: चार जिल्लाका बाढीपीडित संगठित, फ्रिज भएर गएको रकम तत्काल पठाउन माग
Next: राज्यको ध्यान अब शिक्षाको विकासमाः महरा